ဘယ်လိုသတင်းထောက်များသူတို့ရဲ့သတင်းပုံပြင်များသည် Quotes Get နိုင်သလား
အဘယ်အရာကိုဘယ်အရာကို Quote ရန်မ Quote ရန်
ဒါကြောင့်သင်ကရှည်လျားပြုသောအမှုဖွင့် အင်တာဗျူး တစ်ဦးနှင့်အတူ အရင်းအမြစ် , သင်မှတ်စုများ၏စာမကျြနှာရှိသည်, သငျသညျဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ ရေးလိုက် ။ သို့သော်အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်သာသင့်ရဲ့စရှည်အင်တာဗျူးကနေအနည်းငယ်ကိုးကား fit နိုင်ပါလိမ့်မယ်များမှာ ဆောင်းပါး ။ သငျသညျအရာမြားကိုအသုံးပွုရသင့်သလဲ သတင်းထောက်များမကြာခဏသူတို့ရဲ့ပုံပြင်များအဘို့ကိုသာ "အကောင်း" ကိုးကား အသုံးပြု. အကြောင်းပြောဆို, သို့သော်ဤအဘယျသို့ဆိုလိုသနညျး
တစ်ဦးကောင်း Quote ဆိုတာဘာလဲ
ငါအရေးယူလိုက်တဲ့အခါ "ငါ $ 10 အချည်းနှီးသောတဲကိုမှာ $2သန်းဒုံးကျည်ပစ်ခတ်နှင့်တင်းပါးထဲမှာကုလားအုပ် hit ဖို့မသွားဘူး။ ဒါဟာအဆုံးအဖြတ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ "
ပိုကောင်းကိုးကားဘယ်ဟာပါလဲ? တစ်ဦးကောင်း Quote အဘယ်အရာကိုလုပ်ပါသငျ့ပါ: ရဲ့ကျယ်ပြန့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးခြင်းအားဖြင့်ဤအမှုကိုဆင်ခြင်ကြစို့?
တစ်ဦးကကောင်းမွန်သော Quote သင့် ...
အဆိုပါ Reader ကိုရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုဖမ်းပြီး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပမာနှစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းကပထမဦးဆုံးကိုးကားခြောက်သွေ့ပညာသင်နှစ်-မြည်ဖြစ်ပါသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပဲ။ ဒါဟာအထူးသဖြင့်မှိုင်းထံမှယူနေတဲ့ဝါကျတူသောအသံ သုတေသနစာတမ်း သို့မဟုတ်စာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်း။ ဒုတိယကိုးကား, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ရောင်စုံများနှင့်ပင်ရယ်စရာပါပဲ။
A ကောင်းဆုံးကိုးကားကဲ့သို့ ကောင်းသောအရေးအသား , စာဖတ်သူရဲ့စိတျထဲမှာပုံရိပ်တွေ evokes ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပမာနှစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းကပထမဦးဆုံးကိုးကားဘာမျှ evokes ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပဲ။ တစ်ခုစျေးကြီးမြင့်နည်းပညာဒုံးပျံနှင့်အတူ posterior အတွက်ထိမှန်ခံရခြင်းဟာကုလားအုပ် - ဒါပေမယ့်ဒုတိယကိုးကားစာဖတ်သူရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာကပ်ရန်ခညျြနှောငျရဲ့တစ်ဦးထူးထူးဆန်းဆန်းပုံရိပ်ကို evokes ။
အဆိုပါနာယကရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ခု Sense သည်သိရှိစေရန်
ကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးကိုးကားစပီကာပါလိမ့်မယ်သူမျှအထင်အမြင်ထွက်ခွာမည်။ အမှန်မှာကပိုပြီးအမည်မသိပင်တဂွန်အနေဖြင့်တစ်ဦး scripted လိုင်းများကဲ့သို့အသံ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ။
ဒုတိယကိုးကားသို့သော်စာဖတ်သူက၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများအတွက်ခံစားပေးသည် - ဤကိစ္စတွင်အတွက် သမ္မတဂျော့ဘုရ်ှ ။
စာဖတ်သူကိုဘုရ်ှရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နဲ့ off-the-cuff ဟာသသူ့ penchant နှစ်ဦးစလုံး၏အဓိပ္ပာယ်ရရှိသွားတဲ့။
စပီကာကြီးပြင်းရာအရပ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးကိုးကားမှာနောက်တဖန်ရှာဖွေနေ, သင်ပိုင်းခြားနိုင်သလဲ ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ သို့သော်တဦးတည်းက၎င်း၏ငန်ဟာသနှင့်ကြမ်းပုံရိပ်နှင့်အတူဘုရ်ှရဲ့ကိုးကား, မိမိအတက္ကဆက်ပြုစုပျိုးထောင်၏အရောင်များအချို့ပါဝင်သောငြင်းခုန်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးက သတင်းထောက်ကို ငါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့တစ်ချိန်ကနက်ရှိုင်းသောတောင်တစ်လေဆင်နှာမောင်းဖုံးလွှမ်းကြ၏။ သူ twister ၏သားကောင်များအင်တာဗျူးနှင့်သူ၏ဇာတ်လမ်းထဲမှာထားသောစာပိုဒ်တိုများထည့်သွင်းမယ့်ကိုးကားပါရှိသော "ငါသည်သင်သည်အဘယ်အရာကိုပြောပြပါ။ " သင်တောင်၌နားထောငျဖို့သာဖွယ်ရှိနေတဲ့ထားသောစာပိုဒ်တိုများဖွင့်ဒါကတို့နှင့်သူ၏ဇာတ်လမ်းထဲမှာထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ငါ၏အလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်စာဖတ်သူများကိုပေး၏ ဒေသတွင်းနှင့်မုန်တိုင်းကြောင့်ထိခိုက်လူတို့အဘို့ခံစား။
တစ်ဦးက အကောင်းသတင်းထောက် တောင် Bronx ကနေအရှေ့ Los Angeles ကိုအထက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းရန်, မိန့်ခွန်း၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများနှင့်အတူမည်သည့်ဧရိယာတွင်တူညီသောအရာလုပျနိုငျတယျ။
ဒါကြောင့်ဘာမကောင်းပါ Quote ကို?
အချိန်မရွေးတစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးရှင်းလင်းသို့မဟုတ်နားမလည်ဖက်ရှင်တစ်ခုခုကပြောပါတယ်, အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်တစ်ဦးကိုးကားအဖြစ်သုံးစွဲဖို့မသွားနေကြသည်။ ကိုးကားတွင်ပါရှိသောအချက်အလက်များသည်သင်၏ပုံပြင်ရန်အရေးကြီးပါသည်လျှင်ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်, ကပြောခြင်းတို့နဲ့ - သင့်ကိုယ်ပိုင်စကားစထားတော်မူ၏။
တကယ်တော့သတင်းထောက်တွေမကြာခဏများစွာသောလူရိုးရှင်းစွာအလွန်ရှင်းလင်းစွာမပြောတတ်ကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအင်တာဗျူးတွေကိုသိမ်းအရာကိုအများကြီးပြောခြင်းတို့နဲ့ရပါမည်။ လူတွေဟာသူတို့ရဲ့မိန့်ခွန်းတစ်ဦးစာရေးဆရာတစ်ဦးဝါကျ crafts လမ်းကိုကျွမ်းကျင်စွာမရကြဘူး။
သင်ထိုကဲ့သို့နံပါတ်များသို့မဟုတ်စာရင်းဇယားအဖြစ်အချက်အလက်များ၏ reams, ပေးကမ်းခြင်းရဲ့သူတစ်ဦးအရင်းအမြစ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းဆိုရင်တော့သတင်းအချက်အလက်မျိုး paraphrased ရပါမည်။ ကိုးကားမမှတ်ကသူ့ကုမ္ပဏီ၏ဝင်ငွေတတိယသုံးလပတ်အတွင်း, ဒုတိယသုံးလပတ်တွင်5ရာခိုင်နှုန်း3ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဒါပေါ်တွင်သင်ကိုပြောပြသူ CEO ဖြစ်သူဥပမာ, ရိုးရှင်းစွာရှိပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဇာတ်လမ်းအဘို့အအရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်တကကိုးကားအဖြစ်ငြီးငွေ့စရာပါပဲ။
အများစုမှာ ပင်မသတင်းအဖွဲ့အစည်းများ အတွက်အောက်တန်းသို့မဟုတ်ထိုးစစ်မိန့်ခွန်းများအသုံးပြုခြင်းကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကန့်သတ်မူဝါဒများရှိ သတင်းပုံပြင်များ ။ သငျသညျတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းနေတဲ့အရင်းအမြစ် profusely ကျိန်ဆိုသောစတင်သည်, ဒါမှမဟုတ်လူမျိုးရေးစကားလုံးများ uttering လျှင်ဒီတော့ဥပမာ,, သင်ဖြစ်ကောင်းသူတို့ကိုကိုးကားနိုင်ပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။
အဓမ္မသို့မဟုတ်ထိုးစစ်မိန့်ခွန်းသင့်ရဲ့ဇာတ်လမ်းအချို့ပိုကြီးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှင်စည်းမျဉ်းတစ်ခုချွင်းချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏မြို့ရဲ့မြို့တော်ဝန်ကိုဖွင့်, သူသည်ငန်ဘာသာစကားများအတွက်ဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ်လျှင်ဥပမာ,, သင်အမှန်တကယ်မှာ, လူ cuss မှ likes, ထိုပြသနိုင်ဖို့သင့်ရဲ့ဇာတ်လမ်းအတွက်တစ်ဦးအဓမ္မကိုးကား၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
သို့ပြန်သွားသည် အဆိုပါပြီးပြည့်စုံသောသတင်းပုံပြင်ထုတ်လုပ်သည် 10 ခြေလှမ်းများ
သို့ပြန်သွား သင့် Newswriting ပိုမိုကောင်းမွန်စေမခြောက်သိကောင်းစရာများ
ဤတွင် America မှာပုံနှိပ်ပါသတင်းစာပညာ၏သမိုင်းအကျဉ်း Is
ကောင်းသောအယ်ဒီတာများအသေးစိတ်ဂရုကားနဲ့ Big ရုပ်ပုံကိုသတိရနေတယ်မရမည်
တစ်ဦးသတင်းအင်တာဗျူးစဉ်အတွင်းကောင်းမွန်သောမှတ်စုများကို ယူ. နည်း5သိကောင်းစရာများ
ပြင်သစ် & အိန္ဒိယစစ်ပွဲ: ဗိုလ်ချုပ်ဂျိမ်းစ် Wolf
အဆိုပါထိပ်တန်း 11 တိရိစ္ဆာန်အခွင့်အရေးကိစ္စများ
သီရိ Aurobindo (1872 - 1950)
Bhagavad Gita ဝမ်းနည်းကြောင်းနှင့်ကုသမှုများအတွက်ကိုးကား
ပထမ Element ကိုအဘယျသို့ Known ခဲ့သလော
သင့်ရဲ့ iPhone / iPad ကိုအသုံးပြုခြင်းဂစ်တာကိုအသံဖမ်းလုပ်နည်း
Texas ပြည်နယ် Hold'em အပိုဆု Poker စားပွဲတင်ဂိမ်း Play လုပ်နည်း
ဘဝကအကြောင်း positive Quotes
$ 100,000 တစ်နှစ်တာအဘို့အ Blackjack Beat
P နှင့် Ph နှင့်အတူကစပြီးဆစ်ခ်ကလေးအမည်များ
Transformer Grammar (TG) အဓိပ္ပာယ်များနှင့်ဥပမာများ
သင်ကအတိတ်ဘဝအသက်ခဲ့ဖူးနိုင်ပါစေဒါက9လက္ခဏာများ